Nhamba dzeMashandisirwo eInternet 2021: Iyo Dhata Haimborara 8.0 | Martech Zone
Munyika iri kuwedzera kudhijitari, yakawedzera nekubuda kweCCIDID-19, makore ano akaunza nguva nyowani umo tekinoroji nedata zvinotamba chikamu chakakura uye chakakosha muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Kune chero mushambadzi kana bhizinesi kunze uko, chinhu chimwe ndechechokwadi: pesvedzero yekushandiswa kwedata munzvimbo yedu yemazuva ano yedhijitari pasina mubvunzo yakawedzera sezvo isu tiri mukati medenda redu razvino. Pakati pekuvharirwa uye kuvharika kwakapararira kwemahofisi, mabhangi, zvitoro, maresitorendi, nezvimwe, nzanga yakachinja kuvepo kwayo online. Sezvo isu tichidzidza kuchinjika kune ino nguva nyowani, data hairare.
Nekudaro, kukwira kumashure kune pre-covid nguva, huwandu hwedata hwakagadzirwa uye hwakagovaniswa hwanga hwatowedzera, zvisinei zvishoma nezvishoma. Izvi zvinonyatsoratidza kuti mafambiro einternet ari pano kuti agare kune ramangwana rinoonekwa, uye kuwanikwa kwedata kucharamba kuchikura.
50% yemakambani ari kutanga kushandisa data analytics zvakanyanya kana zvichienzaniswa nenguva dzepre-denda. Izvi zvinosanganisira pamusoro pe68% yemabhizinesi madiki zvakare.
Sisense, Hurumende yeBI & Analytics Report
Inenge 59% yehuwandu hwedu hwepasi rose ine internet, nepo 4.57 bhiriyoni vari vashandisi vanoshanda - iyi inenge 3% yekuwedzera kubva pagore rapfuura kureva 2019. Pakati penhamba idzodzo, 4.2 bhiriyoni vari kushingaira vashandisi venhare apo 3.81 bhiriyoni vachishandisa social media.
Iyo 2021 State yeData Center Report
Tichifunga kuti COVID-19 yakatipa sei kuwana kune yakakura kure kure vashandi vekushanda, tinogona kutaura zvakachengeteka kuti ramangwana rebasa redu rasvika, uye rinotanga kumba! - Nenguva ino. Imwe nzira yekutarisa fungidziro iyi ndeiyi inotevera:
Parizvino, ramangwana rebasa riri kumba. Vasati vagara vari voga, vangangosvika gumi neshanu muzana vekuAmerica vaishanda kubva kumba. Ikozvino yaongororwa kuti chikamu chakura kusvika pa15%, inova nhau huru yemapuratifomu ekubatana senge. Microsoft Team, iyo ine avhareji yevanhu 52,083 vanhu vanojoinha paminiti.
Zoom, bhizinesi remusangano wevhidhiyo, raona kuwedzera kukuru kwevashandisi. Zvirongwa zvavo zvezuva nezuva zveapps zvakawedzera kubva pamamiriyoni maviri zvishoma muna Kukadzi kusvika vangangoita mamirioni manomwe munaKurume, neavhareji yevanhu mazana maviri nemazana matatu nemakumi matatu nevatatu vanosangana miniti yega yega.
Vanhu vasingakwanise kushamwaridzana mumunhu vari kuwedzera kushandisa vhidhiyo chat. Pakati paNdira naKurume, Google Duo kushandiswa kwakawedzera ne12.4 muzana, uye vangangoita 27,778 vanhu vanosangana paSkype paminiti.
Kubvira pakunyuka uye kupararira, WhatsApp, iyo iri yeFacebook, yaona kuwedzera kwe51 muzana mukushandiswa.
Neminiti imwe neimwe inopfuura, huwandu hwe data hunowedzera exponentially; ikozvino, izvi zvinoshandura kune anenge 140k mapikicha akatumirwa nevashandisi muminiti iyoyo, uye ndizvo chete Facebook.
Mafemu akazvimirira akadai seFacebook neAmazon, handiwo ega ane data. Kunyangwe hurumende dzinoshandisa dhata, muenzaniso unonyanya kuoneka kuve wekutsvagisa nzira, iyo inozivisa vanhu kana vachiri padyo nemunhu ane COVID-19.
Izvi zvinoreva kuti data ikozvino yave kuratidza hapana zviratidzo zvekudzikira pakukura kwayo, uye pane manhamba ekutsigira ichi chikumbiro. Huwandu uhwu hahugone kudzikira chero nguva munguva pfupi iri kutevera, uye dzinongofanotaurwa kuti dzichakwira sezvo huwandu hweinternet hwepasi rose huchikura nekufamba kwenguva.
Kune vhidhiyo yekutaura yekushamwaridzana, smartphone yekuendesa masevhisi ekuraira chero rudzi rwechinhu, vhidhiyo yekufambisa maapplication ekunakidzwa, zvichingodaro. Nekuda kweizvozvo, data inogadzirwa nguva nenguva kuburikidza nekudzvanya ad, midhiya migove, social media reactions, transaction, kutasva, kutepfenyura zvemukati, nezvimwe.
Yakawanda Sei Dhata Generation inoitika Miniti Yese?
Ramba uchifunga kuti data inogadzirwa miniti yega yega. Ngatitarisei kune yazvino data kuti ingani data inogadzirwa paminiti yedhijitari. Kutanga nedzimwe nhamba muchikamu chevaraidzo:
Muchikamu chekutanga, imwe yeinonyanya kufarirwa pamhepo yekushambadzira chikuva Netflix akawedzera 15.8 miriyoni vatengi vatsva, 16 muzana kuwedzera traffic kubva Ndira kusvika Kurume. Iyo zvakare inounganidza kutenderedza 404,444 maawa ekutenderera kwevhidhiyo
Waunofarira IweTubers rodha kutenderedza 500-hrs yevhidhiyo
Iyo yese inozivikanwa vhidhiyo kugadzira & kugovera chikuva Tiktok inoiswa dzinenge 2,704 nguva
Kukwirisa chikamu ichi neimwe nziyo ndiko Spotify iyo inowedzera inofungidzirwa 28 tracks kuraibhurari yayo
Kufambira mberi kune social media, inova ndiyo inonyanya kukosha uye yakakurumbira chikamu chenharaunda yedu yepamhepo.
Instagram, iyo ine mukurumbira wepasirese yekuona yekugovana network, ine 347,222 mushandisi zvinyorwa munhau dzayo chete, ine 138,889 hits pane yayo kambani profil ads.
Twitter inowedzera vangangosvika 319 nhengo itsva, ichichengeta simba rayo nemamemes nemagakava ezvematongerwo enyika.
Facebook vashandisi - vangave mireniyumu, mabhoomers, kana Gen Z - ramba uchigovera mameseji angangosvika zana nemakumi mashanu,150,000 uye anofungidzirwa 147,000 mapikicha pane inonyanya kufarirwa social media platform.
Panyaya yekubatana, nhamba dzakakwira zvakanyanya kubva pre-covid era:
Iyo ichiri kusimukira yekukurukurirana chikuva Microsoft Teams inobatanidza vangangosvika zviuru makumi mashanu nezviviri nemazana matatu nevashandisi
Huwandu hunofungidzirwa hwevanosvika 1,388,889 vanhu vanofona nemavhidhiyo nemanzwi
Imwe yeanonyanya kushandiswa kutumira mameseji chikuva WhatsApp ine vanopfuura mabhiriyoni maviri evashandisi vanoshanda vanogovana 2 meseji.
Vhidhiyo inopa application Zoom inotambira 208,333 vatori vechikamu mumisangano
Viral nhau uye kugovera zvemukati chikuva Reddit inoona nezve 479,452 vanhu vanoita zvemukati
Nepo chikuva chakanangana nebasa LinkedIn ine vashandisi vanonyorera 69,444 mabasa
Asi, kuisa data parutivi kwechinguva, zvakadini nemari iri kushandiswa miniti yega yega paIndaneti? Vatengi vanotarisirwa kushandisa mari inosvika madhora miriyoni painternet.
Uyezve, Venmo vashandisi vanoendesa anopfuura $200k mukubhadhara, nemari inodarika $3000 yakashandiswa panharembozha.
Amazon, iyo ine mukurumbira online marketing corporation, inotumira 6,659 kutumira pazuva (muUS chete). Zvichakadaro, kuendesa pamhepo & yekutora chikuva Doordash diners inoodha ingangoita 555 chikafu.
Sezvo nzanga yedu inoshanduka, mabhizinesi anofanirwa kuchinjika zvakare, izvo zvinoda nguva dzose kushandiswa kwedata. Kwese kutsvaira, kudzvanya, kufanana, kana kugovera kunobatsira kune yakakura kwazvo dhatabhesi, izvo zvinogona kutungamira mukuwanikwa kwezvinodiwa nevatengi vako. Somuuyo, apo idzi nhamba dzinonzverwa nokungwarira, mashoko anowanwa anogona kubetsera munzwisiso iri nani zvikuru yenyika iri kufamba pamwero unowedzera. Nekuda kweCCIDID-19, mafemu mazhinji ari kushanda zvakasiyana, uye kuve nechaiyo-nguva data nezve mashandiro avo uye nharaunda kunogona kuvagonesa kuita sarudzo dziri nani kuti vararame, uye kunyange kubudirira, mukupindura.
Tags: 2021vanoshandisa internet vanoshandisaAmazonFacebookgoogle duoinfographicinstagram statsvashandisi vepa internetinternet nhambakushandiswa kweinternetmashandisirwo einternet statisticsMicrosoft Teamsinsensesocial media statsmamiriro e bi uye analyticsmamiriro e data centerdata hariraretwitter nhambauyaimafoni efoniizwi rinofonayoutube statsZoom
Shirley Stark parizvino ari kushanda kuInfoCleance seMutungamiriri Wechikwata Chekushambadzira. Ane maoko-pane ruzivo mukushambadzira kweB2B uye anoda kunyora mabloggi, matipi, kuverenga b2b zvinyorwa, Kugadzira Bhizinesi mazano uye kufamba.